संघीयता बचाउँन मुसो खोजिंदै… « Gajureal
संघीयता बचाउँन मुसो खोजिंदै…
प्रकाशित मिति: १० कार्तिक २०७५, शनिबार ०५:५९
–राजेश मिश्र, अमेरिका
एउटा राजा थियो, लोभी र खन्चुवा । एकदिन उसले आफ्नो भान्छेलाई आदेश दियो, “यो संसारमा सबैभन्दा सुगन्धित परिकार बनाएर मेरो हजुरमा उपस्थित गर ।” भान्छेले आज्ञा शिरोपर गर्यो । परिकार तयार भयो । त्यसको सुगन्ध राजाकों नाकभन्दा पहिले दरवारका मुसाहरुको नाकमा पर्यो । मुसाको ताँती लाग्यो । राजाले गाँस हाल्नुभन्दा पहिले मुसाहरूले राजाको थालमा आक्रमण गरे । राजा रिसाए !
बैठक बोलाए । सोधे, ‘यी मुसालाई तह लाउन के गर्नुपर्ला ?” दरवारीयाहरुले भने, “बिरालो पाल्नुपर्छ महाराज ।” महाराजले शहरभरिका बिराला खोजेर ल्याउने फरमान जारी गरे । दरवार बिरालाले भरियो । मुसाहरु भागे । यी नयाँ आगन्तुकहरुले राजाको तकिया र तन्ना च्यातचुत पार्न थाले । राजाले आजित भएर अर्को बैठक बोलाए । “यी बिरालाले सार्है नोक्सान गरे, के गरौँ ?” दरवारियाले भने, “कुकुर पाल्नुपर्छ महाराज ।”
राजाले मुलुकभरिका कुकुर बटुलेर दरवारमा ल्याए । बिराला भागे । तर, कुकुरहरुले राजाको गद्दीमा बिस्ट्याउन थाले । जहा हेर्यो त्यहाँ लींड ! राजाले फेरि बैठक बोलाए । “कुकुरले साह्रै फोहोर गरे, के गर्ने होला ?” दरवारीयाहरुले भने, “अब सिंह पाल्नुपर्छ महाराज ।” राजाले जंगलभरिका सिंह बटुलेर दरवारमा ल्याए । जता हेर्यो त्यतै सिंह लम्पसार ! दरवारिया डराएर हाजिर बजाउन छाडे । कामकाज ठप्प भयो । राजा दरवार छाडेर जंगल भागे । फेरि बैठक बोलाए,, “यी सिंहका कारण राजकाज चलाउन मुस्किल भयो । दरवारमा बस्नै गाह्रो भयो ।”
दरवारीयाहरुले भने, “सिंहलाई धपाउन हाती ल्याउनुपर्छ महाराज ।” राजाले जंगलभरिका हात्ती समातेर दरवारमा ल्याए । सिंहहरु दरवार छोडेर जंगल फर्किए तर हात्तीहरुले दरवार भत्काउन शुरु गरे । राजा फेरि आत्तिए । बैठक बोलाए, “हात्तीहरुले दरवार भत्काउन आँटे, अब के गर्ने ?” दरवारीयाहरुले भने, “मुसा बोलाउनुपर्छ महाराज, हातीलाई मुसाले ठीक पार्छ !”
नेपालमा संघीयता नामको हात्ती ठीक पार्ने मुसो कहिले आ